Home » Creative Writing » ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
Posted by မွသဲ ( 17082011 ) on Jun 18, 2013 in Creative Writing | 36 comments
အခုတလော တော်တော်လေးခေတ်စားနေတာကတော့ ၉၆၉ ပေါ့နော်။ မြန်မာဆိုင်မှာအားပေးပါ။ ကိုယ့်လူမျိုးချင်းရိုင်းပင်းပါဆိုတာတွေကို တော်တော်လေးကြားနေရ တယ်။ ဈေးကြီးရင်တောင်ကိုယ့်လူမျိုးဆိုင်မှာပဲအားပေးပါဆိုတာတွေပေါ့။ လက်ခံပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းရိုင်းပင်းရမှာပေါ့။ အဲတော့လဲ ကိုယ်တွေလဲ ဆိုင်ချင်း တူရင်တောင် ကိုယ့်လူမျိုးပဲအားပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကလဲ သူများထက်ဈေးပိုတင်ထားတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ ပြသနာမရှိပါဘူး။ ကြာဇံ ပဲနီလေး သူများဆိုင် မှာ ၂၀၀ ဆိုကိုယ့်လူမျိုးဆိုင်မှာ ၂၅၀။ ရတယ်။ ၅၀ ပဲဘာဖြစ်လဲဝယ်တယ်။ အဲလိုပေါ့။ အဲလိုအဲလိုချီတက်လာရင်းနဲ့ တနေ့မှာတော့ အသိတယောက်က အလုံးအရင်းနဲ့ ပစ္စည်းတခုဝယ်စရာပေါ် လာတယ်။ ၀ယ်တာမှ အရေအတွက်က ၈၀ နဲ့ ၁၀၀ ကြားလောက်ဝယ်ရမှာ။ အဲတော့ တိုင်ပင်ကြတာပေါ့။ ဘယ်မှာဝယ်မလဲ။ ၀ယ်မဲ့ ပစ္စည်းကလဲ လူမျိုးခြားတွေလုပ်တာ ရောင်းတာများတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကလုပ်တာနဲတယ်။ အဲဒါနဲ့ လိုက်ရှာလိုက်ကြတာ။ တွေ့ပါလေရော။ ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ။ အိုကေတာပေါ့။ ၀ယ်မယ်ဆို ပီး ဆိုင်ထဲဝင်။ လိုချင်တဲ့ပုံပြော။ တိုင်းကြထွာကြ။ ပုံဆွဲကြပေါ့။ အရေအတွက်ကလဲ အခုဘယ်လောက်ယူမယ်။ နောက်ဘယ်လောက်ယူ မယ်ပေါ့။ မက်လောက်စရာပမာဏပါ။ သူကလဲတွက်ချက်ပြီး ဒီလောက်ဒီလောက်ပေါ့။ လျော့ပါအုံး။ မလျော့နိုင်ဘူး။ ဘာဘာညာညာတွေပြောပြီး ပုံပေးမှာတာမို့ ပစ္စည်းအကုန်ရပြီးမှလွဲရင်ခက်မယ်။ အဲတော့ အခု တခုအရင်လုပ်ပြီး ပုံမှန်ပြီဆိုဆက်လုပ်ပေါ့။ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်သဘော တူပြီး ပြန်လာကြ တယ်။ နောက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့ ပစ္စည်းထွက်လာတယ်။ အိုကေကြိုက်တယ်ပေါ့။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ တယောက်က လာကြည့်ပြီးဈေးများနေတယ်တဲ့။ သူဆိုရင် ဒီလောက်ဒီလောက်နဲ့ဒီအတိုင်းထွက်အောင်လုပ်ပေးမယ်တဲ့။ ကျွန်မတို့အံ့သြသွားတယ်။ မဖြစ်နိုင် ဘူးပေါ့။ သူက တခုစမ်းလုပ်ပြမယ်။ ကြိုက်မှမှာတဲ့။ အဲဒါနဲ့ သူလုပ်တာစောင့်လိုက်တော့ ပထမဟာအတိုင်းထွက်တယ်။ အဲဒီမှာပြောစရာလေးတခုပဲရှိတယ်။ အဲဒါကတော့ ဈေးနှုန်းပဲ။ ကျွန်မတို့အားပေးမယ်ဆိုတဲ့ ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ဆိုင်က ပစ္စည်း တခုကို ကျပ် နှစ်သောင်းခွဲတောင်များနေတယ်။ အခု ၈၀ ဆို ငွေသိန်းနှစ်ဆယ်။ အခုတရာဆို သိန်း အစိတ်။ လုပ်ငန်းတခုမှာ အဲလောက်ငွေကို မျိုးချစ်စိတ်တခုထဲနဲ့ပိုပေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်တာနဲ့ပဲ ကျွန်မတို့လဲ ဆိုင်ပြောင်းမှာလိုက်ရပါတယ်။ ငွေ ၅၀၊ ၁၀၀ မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ ကိုယ့်လူမျိုးကိုအားပေး ပါဆိုတာက ပြသနာဖြစ်ရပါတယ်။ သူများတောင် ဒီလောက်နဲ့လုပ်နိုင်တာ။ ကိုယ့်လူမျိုးဆိုတဲ့သူကဘာလို့ မလုပ်နိုင်တာလဲ စဉ်းစားမရပါဘူး။ တခုကိုငါးထောင်လောက် ကွာရင်တောင်ကျွန်မတို့ ဆိုင်ပြောင်းဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူး။ အခုဟာက တော်တော်ကိုဟနေတာမို့ အားမလိုအားမရဖြစ်မိ တာ တော့အမှန်ပါ။ အဲဒီတော့ ဘယ်လိုလုပ် ရင်ကောင်းမလဲ။ ကျွန်မတို့မြန်မာတွေဟာ ဘယ်လိုစီးပွားရှာနေတာလဲ။ သူများလူမျိုးတွေရောင်းနိုင် တဲ့ဈေးကျွန်မတို့ လူမျိုးတွေ ဘာကြောင့်မရောင်းနိုင် ရတာလဲ။ ဟိုဘက်ကလဲ သူတို့စီးပွားအပျက်ခံပြီး မြန်မာတွေပေါ်လျှော့မပေးလောက်ပါဘူး။ သူတို့ရောင်းနိုင်လို့ရောင်းတာပေါ့။ အဲဒါကိုကျွန်မစဉ်းစားလို့ မရဘူး။ ရေရှည်ကို ကြည့်တာနဲ့ တခါစားနဲ့ကွာမယ်နဲ့တူပါတယ်။ ကျွန်မလဲအဖြေခုထိမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်။
ကိုယ့်ကို ကောင်းကောင်း ဆက်ဆံတဲ့ ဆိုင်၊ ပစ္စည်းစစ်တဲ့ ဆိုင်၊ ဈေးနှုန်းသင့်တော်တဲ့ ဆိုင် တွေမှာပဲ ဝယ်မယ်၊ စားမယ်၊ အားပေးမယ်။
တရေးနိုးတဲ့ မျိုးချစ်စိတ်တွေနဲ့တော့ လာမပြောနဲ့လို့။
ခြေမမကောင်း ခြေမ ပဲ။
ရေတွင်းထဲတော့ အဆိပ်မခတ်နိုင် (ခရက်ဒစ် တူ တာရာမင်းဝေ)
အပြည့်အ၀ထောက်ခံပါတယ်။ ၀ီ ( ခရက်ဒစ်တူ မယ်ဂီ့ ) အဆိုအရဆို ကိုယ်ပဲ အပြစ်ဖြစ်နေဒလိုလို။ စိတ်မလုံ စရာတွေဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။ ဂယ်ဘဲအေ။ သိန်းပေါင်းများစွာအနာခံပြီးတော့ မျိုးတော့မချစ် ချင်ပါဘူးအေ။
သူတို့လဲ ကိုယ့်ပြည်သူ/သား တွေပါဘဲ။
ဆန့်ကျင် ရမှာ က လူလူချင်း သွေးစုတ်ချင်သူ တွေ (ဘာသာ ၊ လူမျိုး မရွေး) ကိုဘဲ။
ဒီတော့ ကေဇီ ကို ရော။ သဲနု ကိုပါ ထပ်ဆင့် ထောက်ခံပါသည်။
ဟုတ်တယ်အရီးလတ်ရေ။ သူများရောင်းနိုင်တဲ့ဈေးကို ကိုယ့်လူမျိုးတွေက လိုက်မရောင်းပဲ တခြားသူတွေဆီ က၀ယ်ရင်ပဲ ဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ်တွေပြောနေတာ တမျိုးကြီးပဲ။ ဈေးများလဲအားပေးရမှာပဲတဲ့။ မဖြစ်နိုင်တာနော့်။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံကို အဲလိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကို အလကားပေးမဲ့အစား တကယ်လိုနေ တဲ့နေရာတွေကိုပဲပေးလိုက်တော့မှာပေါ့။
လူမျိုး..ကိုးကွယ်ရာ.. အသားအရောင် ကြည့်ဝယ်တယ်ရောင်းတယ်ဆိုကတည်းက.. Discrimination လူလူချင်းခွဲခြားနှိမ်ချမှုဖြစ်နေတာပါ..။
Anti-discrimination law ဥပဒေရှိရင်.. ဥပဒေနဲ့အရေးယူခံရလိမ့်မယ်..။
ဘာလိုလုပ်ကြရမလဲဆိုတော့.. လူလူချင်းနှိမ်ချခွဲခြားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေတွေ Anti-discrimination law မြန်မြန်ပြဌာန်းဖြစ်အောင် လွှတ်တော်အမတ်တွေဆီဖုန်းဆက်စာပို့လုပ်သင့်ပါတယ်..လို့..။
သာမန်အားဖြင့် အခြေခံဥပဒေမှာပြဌာန်းပြီးတာမို့.. အစိုးရပါဝင်ပါတ်သက်နေရင်.. အစိုးရကိုပါတရားစွဲသင့်/စွဲနိုင်ပါကြောင်း..
The Epoch Times-18 hours ago
CENTRAL ISLIP, N.Y.—A predominantly white suburban New York village is defending itself in federal court against claims of discrimination …
Racial Profiling 2013: Muslim Americans Sue Government Over …
PolicyMic-by Maxime Fischer-Zernin-Jun 13, 2013
On Tuesdayajudge ruled thatadiscrimination case against the leaders of the FBI, Customs and Border Patrol, and Department of Homeland …
တဂျီးမြှောက်ပေးနေဘီ။ တိုင်စာပို့လိုက်မယ်နော် ပုံ ဦးခိုင်ဆိုပီး။
အဲ့ဒီ့ ဆိုင်ရှေ့ သွားကလော်တုတ်နေတာလည်း မဟုတ် ။ ကိုယ့်စိတ်ထဲ ကိုယ် မကြိုက်လို့ မ၀ယ်တာ ဟာ အသားအရောင်ကြည့်ဝယ်လို့ လူလူချင်းခွဲခြား နိုမ်ချမှု့ ဖြစ်ပါတယ် ဥပဒေ နဲ့ အရေးယူ ခံယူ ရလ်ိမ့်မယ် ဆိုရင်တော့ ကထူးဆန်းကို ဖမ်းသာချုပ်ထားလိုက်ပါဗျို့ …
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ကိုယ့်သဘော တောင် လုပ်ခွင့် မရှိတော့ဘူးလား.. သူကြီးရဲ့ .. အဲ့ဒီပုံ ပေါ်နေလေရဲ့..
အဲ့ဒီဆိုင်တွေကို နောက်ဆုံး အခြေအနေ မပေးမှဘဲ ၀ယ်တော့တယ် .. တတ်နိုင်သရွေ့ ရှောင်တယ် ။ ကထူးဆန်းလည်း အရင်တုန်းက ဘယ်လူမျိုးဘာသာ မှ မခွဲခြားခဲ့ပါဘူး ..ဆက်ဆံရေး နဲ့ ဈေးမှန်တာဘဲ ကြည့်ခဲ့လို့ ဘာသာခြားတွေကို အားပေးခဲ့တာ များပါတယ် ။။ အခု သတိပြုစရာ ဖြစ်လာတဲ့ အခါ ပြန်ကြည့်တော့ ကျွန်တော်တို့ သတိမမှု နေခဲ့ကြ တာ ပါတ်ဝန်းကျင် ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီလဲ သတိမှု မိခဲ့ပါတယ် ။ ဆက်ပြီးသာ ဒီလို နေသွားခဲ့ ရင် နောင် နှစ်တစ်ရာ နှစ်ရာကျ ရွှေတိဂုံဆိုတာ ပုံပြင် ဖြစ်စရာ အလားအလာ တွေ တွေ့ လာတော့ ဘယ်သူ့ကြောင့် ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကြောင့်တော့ အဖြစ်မခံဘူးဆိုတဲ့ မှုနဲ့
တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါတယ် ။ ရှောင်ဦးမှာပါဘဲ ။
အဲ့ဒီလို ဆိုလိုက်လို့ ဘာသာရေးလွန်စွာကိုင်းရှိုင်း လိုက်စားသူလို့ တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ။ မမိုချိုလို ဘာသာ စာမေးပွဲ စစ်သူနဲ့ တွေ့ရင် ငှက်ပျောတုံး ဖက်သွားရမဲ့ သူပါ ။ :hee:
အကြမ်းဖက်မှု့ ကိုတော့ အားမပေးပေမဲ့ အနုနည်းကိုတော့ အားပေးပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ အတွက် လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူ လူလူခြင်း ခွဲခြား နှိမ်ချသူ မျက်ကန်း ဆိုလည်း ဆိုပါစေ ။
ယူအက်စ်မှာ ဒီလိုဥပဒေတွေဖြစ်လာတာ.. သိပ်အကြာကြီးတော့ရှိသေးတာမဟုတ်..
မာတင်လူသာကင်းက.. အတင်းကိုလှုံ့ ဆော်ပြီး.. ဖြစ်စေခဲ့တာပါ…
ဆိုတော့… အရင်က.. အသားမဲ.. အာရှသား(အသားဝါ) တွေလို အရောင်ရှိတဲ့အသားအရောင်ရှိသူတွေ.. ဆိုင်ထဲဝင်လာတာနဲ့.. ကားပေါ်တက်တာနဲ့.. ဆိုင်ပိတ်ပစ်တာ..။ ရှိတဲ့သူ(အဖြူ)အကုန်ထထွက်တာတွေလုပ်တယ်..။
ကေကေကေ လိုအစွန်းရောက်အဖွဲ့တွေက.. အသားအရောင်ရှိသူတွေကို…သတ်တာတွေအထိလုပ်တယ်..
ဒါတွေကိုတိုက်ဖျက်ဖို့လုပ်ရင်းနဲ့.. ဒီလို စီဗယ်ရိုက်စ်ဥပဒေတွေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်..။ ဒီဥပဒေအရ.. ကိုယ့်သဘောနဲ့ကိုယ်.. မသိမသာလေး.. မ၀ယ်လည်း..စိတ်ထဲမှာ ခွဲခြားစိတ်ရှိပြီးသားမို့ ပေါ်လွှင်နေပြီး… ဟိုမှာဖက်က.. တရားစွဲလို့ရပါတယ်..။
တရားရေးတက်.. တရားသူကြီး./.ရှေ့နေကလှည့်ပါတ်မေးလိုက်ရင်.. စိတ်ရင်း ပေါ်လွှင်သွားပြီး.. ထောင်ကျမှာပါ..။
လူသားတဦးဟာ.. တခြားလူသားကို.. သူတပါးကို အဆင့်နှိမ့်သတ်မှတ်ထားခွင့်ကို မရှိတာပါ..။ လုပ်တော့ ဘာဖြစ်လည်းကွ.. ဆိုရင်တော့.. တချိန်မှာ ၀ဋ်လည်မှာမို့ပါ..။
၀ဋိလည်တယ်ဆိုတဲ့ စာသားကို ဒီနေရာမှာသုံးမယ်..။ ကိုယ်မဟုတ်တောင်.. ကိုယ့်လူမျိုး..အမျိုး.. တချိန်ချိန်.. တနေရာရာမှာ.. ၀ဋ်လည်မှာပါပဲ..။
ဗမာလူမျီုးဟာ.. ကမ္ဘာတန်းနဲ့ကြည့်ရင်.. မဂျောရတီ(အများစု) မဟုတ်သလို.. ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာကလည်း.. ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့.. မဂျောရတီ(အများစု) မဟုတ်ဘူး..။
ဖြေရှင်းနည်းမရှိဘူးလား.. ဆိုတော့.. အလွယ်လေးရှိပါတယ်..။
ဒီတခါတော့ ထောက်ခံပါတယ် သဂျီးကို။
အကြမ်းဖျင်း ၊ ကျနော့် အတွေ့အကြုံ ကိုပြောရရင် ။
Taxi စီးရင် ကုလား Driver က ဈေးမှန်တယ် ။
ဈေးဝယ်ရင် တရုတ်ဆိုင် က ဈေးမှန်တယ် ။
အမှန်ပဲအဘရေ။ ကုလားဆိုင်တွေလဲဈေးသက်သာတယ်။ မြန်မာTaxi ကတော့ ဈေးဆစ်လို့တဲ့ လမ်းလျှောက်သွားတဲ့ အဲလိုလေးချိုချိုသာသာပြောခံရပါတယ်။
TNA ရေ… (နာမည်အရှည်ကောက် မသိပါ…)
ဘာသာရေး လူမျိုးရေး အရကြည့်မယ်ဗျာ…..
ကိုယ့်လူမျိုးကို အားပေးရမယ်…. ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အားပေးရမယ့်ဆိုတာတော့ ယေဘုယျအားဖြင့် မှန်လေရဲ့…. ပမာဏသိပ်များလွန်းလို့မျိုးမချစ်နိုင်တာလည်း ဒါအမှားမဟုတ်သေးဖူးရယ်……
အမေပြောဖူးသလိုပေါ့ ၁၀၀ ရှိလို့၁၀ လှူရင် တော်ရောပေါ့တဲ့…….
အလှူပဲပြောပြော မျိုးချစ်တယ်ပဲပြောပြော မိသားစုအရေး ကိုယ့်ဝမ်းရေးက ရှိသေးသကိုး……..
ဒါပေသိ မျိုးချစ်လှုပ်ရှားမှူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ စီးပွားရေးကိုထည့်ရင် အရှုံးများတယ်ဆိုတာ ဦးနာအောက် ပုံပြင်က သက်သေပြနေသလားလို့ ပါ…….
စီးပွားရေး ခေါင်းစဉ်ဆိုတာ မပါရင်တော့ အသက်စွန့် လှူပီး လုပ်သင့်ရင် လုပ်ရမှာပေါ့….
အဲ့လိုမှ မလုပ်ခဲ့လည်း လွတ်လပ်ရေး ရခဲ့စရာ အကြောင်းမမြင်……… (ဟယ် ငါ့အသက်ကြီး သေသွားမှာပေါ့… ငါသေရင် ငါမိဘလည်း မရ ငါ့မိန်းမလည်း မရ…. သေတဲ့ အာဇာနည်တွေတောင် အားနာဖို့ ကောင်းပါ့…. အဲ့လိုစဉ်းစားမိတော့လည်း….)
ကဲ စီးပွားရေးဘက်က ကြည့်မယ်ဗျာ…….
ဒီလို ဒီလို… စီးပွားရေးမှာ ဈေးသိသိသာသာ ကွာသွားရင် ဖြစ်နိုင်တာက………
၁. ပထမဈေးဆိုင်က အတင်းဈေးတင်ရောင်းသော ၀ိသမာလောဘ…..
၂. ပထမဈေးဆိုင်က ကွာလတီကို ဦးစားပေးပီး ဒုတိယဆိုင်က အရေအတွက် ဦးစားပေးခြင်း….
၃. ဒုတိယဆိုင်က မသမာသောနည်းဖြင့် ခိုးသွင်းခြင်း…အခွန်ရှောင်ခြင်း… စသော ပုံမှန်မဟုတ်သည့် နည်းလမ်းဖြင့် အသာယူထားခြင်း…..
၄. ဒုတိယဆိုင်က မူရင်းဒိုင်ဖြစ်နေခြင်း……
အခု ရုတ်တရက် စဉ်းစားတာကတော့ ဒီလေးချက်ပဲဗျာ……
(၁) ကြောင့် ဆိုရင်တော့ ပထမဆိုင် အားပေးတာက အဆိပ်ပင် ရေလောင်းတာပဲ…..
(၂) ကြောင့်လားဆိုတာတော့ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ပညာရှင် ရှိရင်တော့ ခွဲလို့ ရကောင်းရဲ့…..
(၃) ဒါမျိုးက မြင်နေရတာ မဟုတ်ပေမဲ့ ရှိခဲ့ရင်လည်း အံ့သြစရာလို့မထင်…..
(၄) သူတို့ လူမျိုး များတယ်ဆိုကတည်းက သူတို့ဒိုင် ဖြစ်နေဖို့ ကလည်း များပါတယ်….. (အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ပထမဆိုင်ကို အားပေးတာနဲ့ဒုတိယဆိုင်ကိုလည်း အားပေးပီသားပါ….)
မျိုးချစ်လှုပ်ရှားမှူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ တရားမျှတဖို့တော့လိုလိမ့် မယ်ပေါ့လေ။ အခုပဲကြည့်လေ မလေးရှားမှာ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ အသတ်ခံရတော့ နာတယ်ဆိုသလို သူတို့လဲသူတို့လူမျိုးနှိပ်စက်ခံရတာနာ တာမဆန်းပါဘူး။ ဒီလိုပြောလို့ကုလားဖက်ပါတယ်တော့မထင်စေချင်ပါဘူး။ လူကိုလူလိုပဲမြင်စေချင်တာပါ။ ဘာသာစွဲ လူမျိုးစွဲမရှိစေချင်တာပါ။
ကိုတိမ်မည်းရယ်။ အခွန်ကတော့ ဘယ်သူမှမဆောင်ပါဘူး။ ဆောင်လှ ဆိုင်းဘုတ်ခွန် စည်ပင် ခွန်ပေါ့။ နောက်တခုက အဲဒီ မြန်မာဆိုင်က ဆိုင်ကြီးပါ။ နောက်တဆိုင်က ဆိုင်သေးပါ။ ဆိုင်သေးတောင် ဒီလိုရောင်းနိုင်ရင်ဆိုင်ကြီးဆိုတာပိုသက်သာသင့်တာပေါ့။ မြန်မာလူမျိုးတွေဈေးတင်တယ်ဆိုတာတော့ လူတကာလက်ခံထားတဲ့အမှန်တရားမို့ စီးပွားရေးနဲ့ပါတ်သက်ရင်တော့ မျိုးချစ်ပါဆိုတဲ့လူတွေလဲ လိုက်နာနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး။
အမရေ ဆိုင်ကြီး ဆိုင်သေးမို့ လို အထင်မစမောလ်နဲ့ ဆြာ…………
တချို့ က ဆိုင်ကသာ ကြီးသာ ဘာ ကုန်မှ ရှိတာမဟုတ်…
လက်ဝေခံကိုပဲ ရှိုးအပြည့်နဲ့ရောင်းနေတာ……….
သူတို့ ဆီမှာ များသောအားဖြင့် အာမခံတာက ပစ္စည်း မှန်ကြောင်းပဲ…..
ခက်တာက အမပြောတာက ကလည်း ဘာပစ္စည်းမှန်းလည်းမသိ…..
တချို့ က ဆိုင်သေး… အပြင်ပန်းကနေကြည့် တစက်မှ အထင်ကြီးစရာ မရှိဖူး….
ဒါပေမယ့် နောက်မှာ ဂိုဒေါင်ကြီး သုံးလေးလုံးနဲ့ပစ္စည်းရော လူကော အပြည့်ရှိတယ်….
သူတို့ က ဆိုင်ကို ဖွင့်တယ်ဆိုဖွင့်ပီး အမသွားကြည့်တဲ့ ဆိုင်ကြီးတွေကို ပြန်ရောင်းနေတာ…..
စီးပွားရေးဆိုတာ အများကြီးရှုပ်တယ် အမရေ…. အပေါ်ယံလောက် မကြည့်နဲ့ ……
အခွန်ကိစ္စလည်း ထည့်ပြောဦးမယ်… အခုခေတ်မှာ တချို့ က အခွန်ဆောင်တာကို ဂုဏ်ယူပီး ဆောင်တယ်….. အများစုကတော့ မဆောင်သေးဖူးရယ်……
အမပြောတဲ့ ဆိုင်နှစ်ဆိုင်မှာ ဟိုဆိုင်ကြီးက တကယ်ဆောင်ပီး တကယ် ပစ္စည်းမှန်ရောင်းနေရင် အမ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ……..
အမ နဲ့ဆန့် ကျင့်ဘက်ပြောဖို့တော့ မရှိပါဖူး……
ဒါပေမယ့် အတိုက်အခံ ရှိမှ တိုးတက်မယ်ဆိုလို့နဲနဲလေး အတိုက်အခံပြောကြည့်တာပါ…
အမက ဆိုင်သေးဘက်က ပါနေတာကိုး…….
ထပ်ပြောဦးမယ်… အခုစာပိုဒ်မှာ လူမျိုးရေး ဘာသာရေး မပါဖူးနော်….
ဆိုင်ကြီး ဆိုင်သေးပဲပြောတာ… အဲ့လူမျိုးရေး ခေါက်ထားလိုက်… အိုက်ဒါပါရင် ပိုရှုပ်သွားတယ်….
အင်း ဘယ်လိုပြောရမယ်လဲတောင်မသိတော့ပါဘူး။ ဆိုင်သေးက တကယ့်ကိုဆိုင်သေး ပါ။ အော်ဒါများများရှိမှ လက်လီဝယ်လုပ်တာပါ။ ဂိုဒေါင်သုံးလေးလုံးလှောင်လောက် တဲ့သူမဟုတ် တာတော့သေချာပါတယ်။ ဆိုင်ကြီးကလဲ အခုအခွန်ဆောင်နေတဲ့ ခရိုနီတွေရဲ့ အိပ်ခန်းလောက်တောင်မကျယ်ပါဘူး။ ၁၅ ပေ ပေ၅၀ တိုက်ခန်းမှာပါ။ ဆိုတော့ကာ သူ ( ဆိုင်ကြီး ) အခွန်ဆောင် လိမ့်မယ်လို့တော့မမထင်ပါဘူး။ ကျွန်မဆိုင်သေးဘက်ပါပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူ့ဆီမှာ ၂၅၀၀၀ သက်သာလို့ပါ။ အဲဒါကြောင့်လဲမှာပါတယ်။ သူသက် သာတာမယုံလို့ မျက်စိနဲ့သွားကြည့်ပါတယ်။ လိုချင်တဲ့ ဂိတ်မပြည့်ပဲ ဂျင်းထည့်လိုက် မှာစိုးလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ သူဂိတ်ပြည့်သုံးပေးသွားပါ တယ်။ ကျွန်မဆိုလိုချင်တာက အခုလို မြန်မာဆိုင်ပဲအားပေး ပါဆိုတဲ့သူတွေ မျက်မြင်အခြေအနေကိုသိစေချင်တာပါ။ ၀ယ်သူကိုပဲဖိ အားပေးပြီး ဈေး များလဲဝယ်ရမယ်စွတ်အော်နေတာ။ ရောင်းသူတွေကို ဈေးမှန်ရောင်းဖို့တခွန်းမှပြောသံ မကြားဖူးဘူး။ အဲဒါလေးသိစေချင်တာပါ။
တိမ်မည်းပြောသလို ကျွန်မတို့ ဆိုင်သေး ဆိုင်ကြီး ဘာတွေဘယ်လိုလုပ်နေလဲ ဆိုတာမသိရလောက်အောင်တော့ မညံ့ပါ ဘူး။ သေသေချာချာဝေဖန်သုံးသပ်ပါတယ်။ လူကဲခပ်လဲမညံ့ပါဘူး။ တိမ်မည်းပြော တာတွေတခုမှမဟုတ်ပါဘူး။
”အမပြောတဲ့ ဆိုင်နှစ်ဆိုင်မှာ ဟိုဆိုင်ကြီးက တကယ်ဆောင်ပီး တကယ် ပစ္စည်းမှန်ရောင်းနေရင် အမ ဘယ်လိုလုပ်မလဲ……..”
ကျွန်မတော့မထင်ပါဘူး။ ဒီလိုဆိုင်တွေထိ အမြတ်ခွန်လိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီအမြတ် ခွန်ဋ္ဌာနက တော်တော်ကို ချီးကျူးစရာပါ။
ပစ္စည်းနာမည်နဲ့ဆိုင်နာမည်ကိုမပြောတာကတော့ ကိုယ့်လူမျိုးဆိုင်မို့ မတိုက်ခိုက်ချင် တာပါ။ မဟုတ်လို့ကတော့ ဓါတ်ပုံနဲ့ပါတင်နိုင်ပါ တယ်။ နှစ်ဆိုင် ယှဉ်လို့ကြည့် လိုက် တာနဲ့သိနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ဒီပိုစ့်ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေ လုပ်ရမဲ့အလုပ်တခုကျန်နေ တယ်ဆိုတာလေး တနည်းနည်းနဲ့သိစေချင်တာပါ။ ဈေးမှန်ရောင်းဖို့ ဖိအားပေးဖို့ ပါ။ ဈေးတူနေရင် ကျွန်မတို့ အလိုလိုမျိုးချစ်ပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာလေး အဲဒါလေး သိစေချင်တာပါ။
၃။ ဈေးဝယ်သူကိုအလေးထားဆက်ဆံရမယ်( Customer is the king )
Discrimination လူလူချင်းခွဲခြားနှိမ်ချမှုဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်နေသူများအား ဆန့်ကျင်ကြ။
မှတ်တယ်ဦးကြီးမိုက်ရေ။ ဘာသာစွဲလူမျိုးစွဲမရှိပဲနိုင်ငံကြီးသားပီသစွာ အတူအေးချမ်းစွာလက်တွဲနေနိုင်ရင် တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှာပါ။
အချဉ်ထုပ် သွားရည်စာရောင်းတဲ့ဆိုင်တောင် ကွာပ့ါ
ဖော်ရွေတဲ့ဆိုင်အရေအတွက်ကို %ချကြည့်ရင် သူရို့ဖက်ကသာဒယ်
တကယ့်ကိုပါပဲ။ မြန်မာဆိုင်တွေမှာ မျက်နှာရှစ်ခေါက်ချုိးတွေနဲ့ သူတို့ ကုလားတရုတ်အားလုံးချိုချိုသာသာ ချည်းပါပဲ။ နောက်တခါလာချင်အောင်ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လိုနေတဲ့ ဟာလေးတွေ သွားဝယ်တဲ့ဆိုင်ဆိုရင် မြန်မာစကားတောင်ကောင်းကောင်းမတတ်တဲ့တရုတ်ဆိုင်ပါ။ နောက်တခါလာချင်အောင် သူ့ဆီက ၀ယ်အောင်သူတတ်တဲ့မြန်မာစာကားတွေနဲ့ အားနာစရာကောင်းအောင်ချိုသာလွန်းပါတယ်။ အမတို့အတုယူသင့်ပါတယ်။
ဝယ်ပါများလာတော့လည်း ဘယ်ဆိုင်ကဘယ်လို ဆိုတာသိလာရ
တယ်။အသားအရောင် ဘာသာ လူမျိုးတွေ ဘာတွေတော့
ဆန်းစစ်မနေဘူး။ အဓိကက အဓိက ပါပဲ။
အဲမျိုးချစ်စိတ်နဲ့ ဦးနာအောက်လို ယှဉ်ဖိုက်မယ်ဆို အားပေးမယ်။
ဦးနာအောက်လိုဖိုက်ရင် ဒို့တနိုင်ငံလုံးဆင်းရဲမွဲတေတော့မပေါ့ကွယ်။ ခရိုနီတွေတောင် ဦးနာအောက်မလုပ်ရဲ ကြဘူးရယ်။
ဒါလေးများ ..ဗျာ ..ဟိုဘုရားသား ၀ီ ကို သွားမေးပါလား …စူအကုန်စိ ဒယ်..။
နောက်တာပါဗျာ။ အတည်ပြောပါ့မယ်။ Mass Production ရဲ့ သဘောတရားနဲ့ကြည့်ပါ။
များများထုတ်နိုင်သူက cost per item ပိုနည်းလို့ profit margin ပိုကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ ရောင်းနိုင်ပါတယ်။
ခုရေများများရောင်းရလို့ all total မှာ သူက ပိုမြတ်ပါတယ်။ နည်းနည်းပဲထုတ်နိုင်သူကတော့
per item မှာ မာဂျင်ထူထူတင်ပါမှ သူ့အတွက် အမြတ်ကျန်မှာမို့ ပါပဲ။ သည်တော့ ထုတ်လုပ်ေ၇းပိုင်း
ပိုခိုင်မာတဲ့ ဘက်က ၀ယ်တာ ၀ယ်သူအတွက် အကျိုးမယုတ်နိုင်ပါဘူး လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
၀ံသာနု ကိစ္စကတော့ ..အင်းးးး ၀ီ ဖတ်ဖို့ ကော်တလာ စာအုပ် ၁အုပ်လောက် ပို့ပေးချင်တယ်ကွီ။
စွက်ဒဂျီ လောက်မဖတ်နဲ့ အူး ပရင်စပါယ်လောက် အရင် ဖတ်ရင်ကို ၀ီ ပြောင်းလဲသွားမှာ ဂီ သိပါတယ်။
ပြည်တွင်းကနေပြီး ဘာသာခြား အားမပေးနဲ့ အော်တယ် ဘာသာခြားတိုင်းပြည်မှာ လူသိန်းနဲ့သန်းနဲ့ချီ
အလုပ်လုပ်နေရတာ သူမပြောဘူး။ ဒီလူတွေအတွက် ပြန်လာခဲ့ ဆိုပြီး ခရိုနီ ခရိုနက်တွေ က အလုပ်ပေးဖို့ဆိုတာကလည်း သိတဲ့အတိုင်း။
ခေတ်သစ် ဦးနာအောက် တော့ ပေါ်ဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့။ ဦးနာအောက် နောက်ဆုံးဘာဖစ်သွားသလဲ အားလုံးအသိ။
ဥပဒေသ။ ကိုယ့်ထက် financial capital ကြွယ်ဝတဲ့ ပြိုင်ဘက်ကို price war သွားလုပ်တယ် ဆိုတာ ကိုယ့်လည်ပင်းစွပ်မယ့်ကြိုး
အဲဒါပြောဒါပေါ့အေ့။ တကယ်တော့ မယ်ဂီ့ရေ ညီးရဲ့ဝီကို သိစေချင်တာပဲ။ သူပေါက်ကရတွေပြောပြောနေ တာကိုအေ စိတ်မချမ်းသာလို့။ တကယ်ဆို စီးပွားရေးသမားတွေကိုလဲပြောရမယ်လေအေ။ ဈေးလျှော့ရောင်း ဖို့။ အဲဒါတခွန်းမှမကြားမိဘူး။ တကယ်ပဲ ၀ယ်သူတွေကိုပဲ များလဲဝယ်ဆိုတော့ ဘယ့်နှယ့် သေရချည်ရဲ့။ အဲဒါသူမသိဘူးအေ့။ သူက၀ယ်မှမစားဖူးတော့ခက်တာပေါ့။ ထင်ရာစွတ်ပြောနေတာ။ သူကဒီမှာအားလုံးနှင် ထုပ် ငါဒို့ချည်းနေမယ်လုပ်ချင်တာ။ အားလုံး ဒုတ်ခရောက်ကုန်မယ်သူမသိဘူး။ အဲဒါလေးသိစေချင်တာ။ သူကြားအောင်များများအော်အေ။ လိုအပ်ရင် ခုပြောဒဲ့စာအုပ်တွေသူ့ဆီပို့ပေးလိုက်။
အဲလောက်မျိုး ချစ်နေကြရင်လဲ နိုင်ငံခြားထွက်လုပ်နေ တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလဲပြန်ခေါ်ရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ညီးလဲပြန်လာအေ။ ဒီမှာ ရွှေပြည်နန်းက သနပ်ခါးစိုက်နည်းသင်ပေးမယ်ဆိုလား။
ကျွန်တော့်အဖေက မြန်မာ/ဗမာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူ ၊ ကျွန်တော့်အမေက မြန်မာ/ဗမာ+မွန်လူမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူ
ကျွန်တော်က မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူ
ကျွန်တော် ဟာ နေ့ စဉ် စီးပွားရှာ ၊ အလုပ် လုပ် ရပါတယ် ။
ရတဲ့ငွေ ထဲကနေ ၊ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ ကိုးကွယ်တဲ့ ဘုရား ၊ ကျောင်းကန်များတွင်သော် လည်းကောင်း
ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေထဲ က ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ ကလေးသူငယ်တွေ ပညာရေးအတွက် စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုး ပရဟိတ အဖွဲ့ များသို့ လည်းကောင်း
စီးပွားရှာလို့ ရတဲ့ အမြတ်အစွန်းမှသည် လှူဒါန်းခဲ့ ၊ လှူဒါန်းဆဲ ၊ လှူဒါန်းဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။
ကျွန်တော် ဟာ ကုလားများနဲ့ စစ်မဖြစ်ချင်ပါဘူး ။ ကုလားများကိုလဲ နှင်မထုတ်ပါဘူး ။ နှင်ထုတ်ရအောင်လဲ .. သူတို့ တွေနေတဲ့ မြေအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာ သူတို့ တွေ အလကားရထားတာ မဟုတ်လို့ ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း နဲ့စော်ကားလာရင်တော့ ပြန်ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်
အရင်တုန်းက ကုလားတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးတွေ ကို မသိမသာတစ်မျိုး ၊ သိသိသာတစ်မျိုး စော်ကားခဲ့တာကို မသိချင်ဟန်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် ၊ ဒီအချိန်မှာတော့ မသိချင်ဟန် မဆောင်နိုင်တော့ပါဘူး ။
ကိုယ့်အမျိုးကို ထိရင် ကာကွယ်ရပါမယ်
တစ်ရက်က ကျွန်တော် စီးပွားလုပ်ရာနေရာဆီ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဘက်မှ ဘုန်းကြီး၂ပါး နဲ့ရှမ်းလူမျိုးလင်မယား ၂ယောက် ရောက်လာပါတယ်
ဘုန်းကြီး၂ပါး က “ ဒကာ ၊ မင်းတို့ က ဗုဒ္ဓဘာသာတွေလားလို့ မေးပါတယ် ”
“ တင်ပါ့ဘုရား ” လို့ ဖြေလိုက်တော့
စီးပွားလုပ်ရာနေရာက ဘုရားစင်တွေ ၊ ဘုရားပုံတော်တွေ ၊ အလှူမောဒနာမှတ်တမ်းတွေကို သေချာကြည့်ပြီး ၊ ပါလာတဲ့ ရှမ်းလူမျိုး လင်မယား၂ယောက် ကို ၊ မင်းတို့ ဒီကနေ အားပေးဟေ့ လို့ မိန့် ပါတယ်
ရှမ်းလူမျိုး လင်မယား၂ယောက်လဲ ၊ သူရို့ အလိုရှိတာများကို ဈေးတစ်ချက်မဆစ်ပဲ အားပေးကြပါတော့တယ် ။
ကျွန်တော့်ဘက်ကလဲ ၊ ကျွန်တော့ စီးပွားပြိုင်ဘက်များထက် ဈေးနှုန်းများကို ပိုမတင်/ပိုမယူထားပါဘူး
သူရို့ တွေ ကျွန်တော့်ဆီမှာ အားပေးတာကိုလဲ မြင်ရော ၊ ကျွန်တော့်မှာ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ကာ ကြပ်သီးထတဲ့အထိပါပဲ ။
ဈေးနှုန်းကိုလဲ အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် စီစဉ်ပေးကာ ၊ အချိုရည်သံဗူးများနဲ့ ဧည့်ခံလိုက်ပါတယ်
သူရို့ ကလဲ ပြောသွားပါတယ်
နောက်လဲ ကျွန်တော်နဲ့ ပဲ ဆက်အလုပ် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ ။
အေးပေါ့အေကပေရယ်။ ညီးတို့လိုဆိုင်တွေကတော့ ချွင်းချက်ထားပါတယ်။ ကပေတို့လိုမှန်မှန်ကန် ကန် ရောင်းတဲ့မြန်မာဆိုင်တွေမရှိဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လဲ အဲလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်နဲ့ အမြတ်ပိုတင်တဲ့ဆိုင်အချိုးချကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ အမြတ်ပိုတင်တဲ့မြန်မာဆိုင်တွေပိုများနေတယ်။ အဲဒီဆိုင်တွေကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သလို အစောက ကပေပြောတဲ့ ၀င်ဝင်ပါနေတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကိုလဲပြော ချင်တာပါ။
ဈေးတချက်မဆစ်ဘူးဆိုတာက အအေးလို မုန့်လို ကြာဇံ ပဲနီလေးလိုဟာမျိုးတော့ဟုတ်တယ်လေကပေ ရယ်။ ဒါပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့နေရာမှာ ဈေးမဆစ်ပဲဆိုတာမျိုး အခုလို သိန်းအစိတ်လောက်ပိုပေးရမယ့် ဟာ မျိုးကျတော့ တမျိုးပေါ့။ အဲဒါလေးပြောချင်တာပါ။ နောက်တခုက အပေါ်မှာပြောခဲ့သလို အဲလိုလုပ်နေတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုလဲ ထိန်းချုပ်သင့်တယ်ဆိုတာ အဲဒီမဲဆွယ်စည်းရုံးနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေနဲနဲသတိထားမိစေချင်တာပါ။ ဈေးတူလို့ကတော့ ကိုယ့်လူမျိုးချင်းအားပေးရတာ ဘာမှမပင်ပန်းပါဘူးအေ။ နဲနဲများအုံးလဲရပါသေးတယ်။ အခုလို မဆန့်ရင်ကာဆိုတာမျိုးကျတော့——-
ပစ္စည်းမှန် / ဈေးမှန်..ဆိုတဲ့စကားက..
ကျွန်တော် တို့ နိုင်ငံထဲမှာ..
တွဲလျက်ရှိတာ ရှားတယ် ။
ပစ္စည်းမှန်ရင်..ဈေး မမှန်ဘူး ။
ဈေး မှန်တယ် ထင်ရင်..ပစ္စည်းမမှန်ဘူး ။
ကျွန်တော်တော့.. သိမ်ကြီးဈေးလို …
လမ်းဘေး.ဈေးတန်းလို …နေရာတွေမှာ.ရောင်းတဲ့ .. ဆိုင်တွေမှာ..
ဘာမှ မ၀ယ်ဖြစ်တာကြာပါပြီ ။
ဈေးနှုန်းကပ်ထားပြီး.. သင့်တင့်မျှတ တယ် လို့ .. သတ်မှတ်လို့ ရတဲ့ …
စီးတီးမတ်လို နေ၇ာတွေမှာ သာ ၀ယ်ဖြစ်တော့တယ် ။
ငါးဆယ် ။ တစ်ရာ.ဈေးပိုပေးရတာ..ရှိတယ် ။
ဒါပေမယ့်.. စီးတီးမတ်လိုနေရာမျိုးကျတော့.. ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ခွင့်..ရှိတယ် ။
ကိုင်လိုက် ချလိုက်..လုပ်နေလို့ လည်း..မျက်စောင်းထိုး ငြူစူနေမယ့်ေ၇ာင်းသူ မရှိ ။
အေးအေးဆေးအေး သက်တောင့် သက်သာ ၀ယ်လို့ ရတယ် ။
ငွေ ရှင်းဖို့ ..ကောင်တာမှာ တန်းစီ ရတာ တစ်ခု ပဲ.. စိတ် ညစ်ရတယ် ။
အဲ.. သိပ် မဆိုင်တာတွေ ပြောမိပြီ ။
မှန်ပါတယ် အလက်ဆင်းရေ။ တခုချင်း ဒါမှမဟုတ် အိမ်သုံးဆိုရင်တော့ ဈေးမှန် ပစ္စည်းမှန် ရနိုင်တဲ့ စီးတီးမတ်လိုဟာကိုပဲသွားပါတယ်။ ၅၀ ၁၀၀ များတာပြသနာမှမဟုတ်တာ။ ကိုယ်တွေကတခုချင်း အလွန်ဆုံး တမျိုးကို လေးငါးခုထက်မှပိုမ၀ယ်တာ။ လော့လိုက်ဝယ်ရမဲ့ဟာကျတော့ နဲနဲပြသနာရှိတယ်။ ကိုယ်ကလဲစီးပွားရေးလုပ်တာကိုး။ လုပ်ငန်းအစဆိုပိုဆိုးတာပေါ့။ ကုန်စရာဆိုတာနဲမှမနဲပဲ။ အဲတော့လဲ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပစ္စည်းလဲအမှန်ရ ဈေးလဲသက်သာတာကိုပဲလိုက်ရှာရတာပေါ့။ အဲဒီမှာ အခုလိုတွေ့တာ ပဲလေ။ မျိုးချစ်လိုက်တာ။ တကယ်လို့ဟိုလူသာ ( ဒုတိယဆိုင် ) ပေါ်မလာရင် ကျွန်မတို့ သိန်းအစိတ်လောက်ပိုပေးလိုက်ရ တော့မှာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ ဆိုတာနဲ့ကျွန်မတို့ တခြားဆိုင်ကိုစုံစမ်းဖို့စိတ်ကူးမရှိခဲ့တာ အမှန်ပါ။ တခြား ပစ္စည်း တွေဝယ်တုန်းက လူမျိုးခြားဆိုင်တွေဆို ဆိုင်တကာပေါက်စိစုံစမ်းပြီးမှ သက်သာတာဝယ်တာပေမဲ့ ဒီဆိုင်ကိုတော့ တဆိုင်ထဲဝင် တခါထဲမှာခဲ့ တာပါ။ အဲလိုယုံကြည်ချက်ထားခဲ့တာကိုမှလုပ်ရက်လေခြင်းဆိုပီးပိုရင်နာရပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးချင်း ယုံကြည်မိတာ ကံကောင်းလို့ သိန်းအစိတ်မဆုံးရှုံးတာပါ။
အဲ့ ဒီလိုမျိုးဆိုင်တွေ နာမည်ပါ ရေးပြီး တင်ဗျာ
နောက် လူတွေ ရှောင်လို့ တိမ်းလို့ ရတာပေါ့ …………။
ကိုယ့်လူမျိုးချင်းဆိုင်မို့လဲမတင်ရက်တာပါ။ တခြားဆိုင်ဆိုရင် နာမည်နဲ့တကွတင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ တော်ဝင်စင် တာက ဆိုင်လိုမျိုးဆိုရင် ဆိုင်အားလုံးနာမည်နဲ့တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အခုဟာကတော့ မတင်ရက်တာမို့ ဒီလိုပဲ အကြမ်းဖျင်းရေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်မမှာလဲမျိုးချစ်စိတ်ကလေးကျန်နေသေးတယ်ထင်ပါ့။ လုပ်တာက စတီးစား ပွဲတွေပါ။ တာမွေအ၀ိုင်းထိပ်ကပါ။ အဲလောက်လေးဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်မတောင်အတော်လွန်သွားပီလားမသိ။
သူတို့တောင်..ကိုယ့် လူမျိုး ချင်းချင်း… မညှာတာပဲ..ငွေနောက်လိုက်သေးတာပဲ ။
နောက်လူတွေ…ဒီလို.. အဖြစ်မျိုးမကြုံ ရအောင်….
နာမည်ပါ..ရေးတင်ရင် ပိ်ုကောင်းမယ် ။
အဟိ ။မြှောက်ပေးတာမဟုတ်ပါ ။
နာမည်ရေး တင်လည်း…မလွန်ဘူးဆိုတာလေး.ဖြည့်ပြောကြည့်တာပါ ။
ခင်ခ ကတော့ ပိုက်ပိုက် ကိုပိုချစ်တယ်။
ကိုယ်မှာရှိတဲ့ ပိုက်ပိုက် က အလကားရထားတာ တစ်ကျပ်တောင်မရှိဘူး ဒါကြောင့် ပစ္စည်းဝယ်ရင် နိုင်ငံခြားမှာလို့ ပြည်တွင်းထက်သက်သာမယ်ဆို နိုင်ငံခြားကတောင် ၀ယ်လိုက်ချင်ပါရဲ့ဗျာ။
ကပ်ဆေးနည်းထင်နေလား ဆရာမ၊ အဲလိုဟုတ်ဘူးနော် တန်ရာတန်ကြေးဘဲပေးချင်တာပါ။
အဟုတ်ပဲကိုခင်ခရေ။ ကျွန်မလဲ ဘယ်သူ့ဆီကဖြစ်ဖြစ်ပိုသက်သာတယ်ဆိုအားပေးမှာပဲ။ သူတောင်ရောင်းနိုင်လို့ရောင်းတာပဲနော့ ကိုယ်လဲဝယ်မှာပဲ။ ဈေးများလဲဝယ်ဆိုတာကြီးကိုပဲ မကျေနပ်တာ။
မျက်​မှန်​ ပါဝါမှန်​တပ်​ပြီး မြို့ထဲက
မည်​သည့်​ဆိုင်​မဆို ၁၅၀၀၀ ကျတယ်​
မြို့သစ်​တစ်​ခုက ကုလားဆိုင်​မှာ​တော့ ၁၀၀၀၀ ​အောက်​နဲ့ရပါတယ်​
ကျုပ်​က ​ထေရဝါဒ စစ်​စစ်​​နော်​
ကျုပ်​ဆိုလိုချင်​တာက ကိုယ့်​လူ​တွေ ဆန်​ရင်းနာနာဖွတ်​​နေတာ
ဟုတ်တယ်။ အဲဒါ အမျုိးစောင့်လို့အော်နေသူတွေကိုပြောပြချင်တာ။ သူတို့ကိုလဲဈေးမှန်ရောင်းဖို့ အော်ပေးပါလို့။
လော့ဂျစ်စတစ် ထောက်ပံ့ရေးပိုင်း ကွာလို့နဲ့တူတယ်.. လူခြင်းတူတောင် ကုန်ကြမ်း ပေါပေါနဲ့ရ အကြွေး လိုသလောက်ရသူက အရည်အတွက် များများယူပီး အောက်ဈေးနဲ့ ဝင်မှာပေါ့..။ လူသစ်ဆို ဈေးလျှော့ပေးဖို့ ဝင်မလေးဘူး..။ တရုတ်၊ ကုလားတွေ အားသာချက်က အချင်းချင်း စည်းလုံးမှုရှိပီး ကိုယ့်လူကိုယ် မြေတောင်မြှောက်ပေးတယ်၊ အမြှောက်စားခံရသူကလည်း သစ္စာရှိတယ်။ ကျနော့်အသိတယောက် ဆိုင်ဖွင့်တယ်၊ လုပ်ငန်းချဲ့ဖို့ အကောင်ကြီးဆီကပ်တော့ ဟိုကမွေးချင်တယ် သို့သော် အနှောင်အဖွဲ့ သိပ်များတယ်၊ ဥပမာ – သူနဲ့မတည့်သူကို ချလိုက်၊ တီးလိုက် စတဲ့ အလုပ်သဘော မဆန်တာတွေ ပါလာတော့ ရှေ့ဆက်မဖြစ်တော့ဘူး..။ သစ္စာမရှိလို့ အခြင်းခြင်း ပြန်မကြည့်တာလဲ မြန်မာတွေအတွက် အဟန့်အတား ဖြစ်နေလားမသိ.. အထင်ပြောတာနော်.. တရုတ်ကုလားတွေနဲ့ မတူဖြစ်နေတာကို တွေးကြည့်တာ….။ ကျုပ်ကတော့ သာဂျီးသာမီး ရအောင်ယူမှာပဲ၊ သစ္စာ မေတ္တာ ဇာတ်ထဲသွားပြော.. အခြစ်မှာ မျက်စိမရှိ..ဂျစ် ဂျစ်..
ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာပြောပြောဘယ်လိုမှ လုပ်စရာမလိုပါ …
ကိုယ်ပိုင်အသိဥာဏ် နဲ့ သာလျှင် စဉ်းစားချင့်ချိန်နိုင်စွမ်းရှိသင့်ပါတယ် ..